डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - 'लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खोलेर जनजीवन सुचारु गरौँ' Canada Nepal
डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - 'लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खोलेर जनजीवन सुचारु गरौँ'
क्यानाडानेपाल डेस्क भाद्र २२ २०७७
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि अहिले देशका बिभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा जानकारी दिइरहेका छन् ।
यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खोलेर जनजीवन सुचारु गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले भनेका छन् - बिगत ६ महिनादेखि हामीले कुनै न कुनै किसिमको लकडाउन भोगेका छौं । लकडाउन जहिले पनि २ देखि ३ हप्ता गर्दा पुग्थ्यो । त्यो समयमा रोग नियन्त्रण, राहत तथा आफ्नो पेशाबाट बिस्थापित तथा बेरोजगारलाई पुनर्स्थापना गर्ने गृहकार्य हुनुपर्ने थियो | साथै लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अबधिमा नागरिकलाई राहत दिने, हरेक टोल, बस्ती तथा गल्लीमा ब्यापक अनुगमन, निगरानी र जनचेतनाका काम गर्नु पर्थ्यो । मुख्य सडक र ठूला बजारमा मात्र सरकारको उपस्थिति सिमित गर्दा संक्रमण घट्नुको साटो बढ्दै गयो ।
- अब सरकारले निषेधाज्ञा हटाएर धेरै भीडभाड हुने क्षेत्र ( स्कुल, कलेज, फ्लिम हल आदि ) बाहेक अन्य गतिबिधि सुचारु गर्ने ।
- मास्क, साबुन तथा स्यानिटाइजरलाई हरेक स्वास्थ्य संस्था, क्लब, टोल आदिमा निशुल्क उपलब्ध गराउने ।
- जनपरिचालन गरेर जनस्वास्थ्य चेतनाको अभियान संचालन गर्ने ।
- स्थानीय निकायमार्फत मास परीक्षण, आइसोलेसन तथा राहतको काम गर्ने ।
- सरकारी संयन्त्रले गल्ली, बस्ती, टोल, सडक, चोक, भीडभाड हुने कार्यालय आदिमा सघन अनुगमन, निगरानी तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड ब्यबस्थापन गर्ने ।
- सिमानाकालाई कडाइ गर्ने ।
- संक्रमित क्षेत्रलाई मात्र शिल गर्ने ।
- संक्रमण कम भएका जिल्लामा लामोदुरीका यातायात संचालन गर्ने ।
- सहरमा बस्न गाह्रो भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो घरमा गएर खेतीपाती गरेर खाने बाताबरण निर्माण गर्ने।
- ठूला बस मापदण्ड पुरा गरेर संचालन गर्ने । माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्सको रुपमा र टेम्पुलाई सामान बोक्ने गरि सुचारु गर्ने ।
- चाडपर्वको लागि भीडभाड नहुने वातावरण निर्माण गर्ने ।
- अस्पतालका क्षमता बढाउने । जनताको पहुँच बढाउने ।
- सुशाशान, मितव्ययिता, जिम्मेवार र पारदर्शी किसिमले कार्य सम्पादन गर्ने ।
- जनताको जीवन र जीविका बचाउने सरकारको दायित्व हो ।
- जनताको मनोबल बढाउने, मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्ने तथा देशलाई नै उत्साहको मार्गमा अग्रसर गराउने ।
- ६५ बर्ष नाघेका, दीर्घरोगको औषधि सेवन गरिरहेका तथा बालबालिका घरमै बस्ने । सकभर घरभित्र पनि घुलमिल नभएर बस्ने ।
- सक्रिय उमेरका व्यक्तिहरु काममा निस्किने । घरबाहिर जाँदा अनिबार्य रुपमा सहि तरिकाले मास्क लगाउने । सकेसम्म हरेक ठाउँमा २ मिटरको दुरी पालना गर्ने । साबुनपानीले हात धोइरहने । साबुनपानी नभए स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने । भीडभाड नगर्ने ।
- घरमा आएपछि कपडा, मास्क, चस्मा, झोला, पंजा आदि घरबाहिर राखेर तथा नुहाएर मात्र परिवारमा घुलमिल हुने ।
- आफु, आफ्नो परिवार र समाजलाई रोग लाग्न नदिन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने ।
- हल्ला, भ्रम तथा सनसनीपूर्ण कुराको विश्वास नगर्ने । आधिकारिक निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह विश्वास गर्ने ।
- पुरानो कामबाट बिस्थापित वा बेरोजगार भएमा कृषि, पशुपंक्षी पालन, गाउँको उत्पादन बजारमा ल्याएर बिक्रि गर्ने आदि नयाँ र कम जोखिमयुक्त काम अपनाउने ।
- समाजमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने । डा. रवीन्द्र पाण्डे
- जुन ठाउँमा आफुलाई सजिलो, सुरक्षित र रोजगारीको अवसर मिल्छ, त्यहि ठाउँमा बस्ने ।
- धेरै डर नमान्ने, निरास नहुने । सबै सतर्क भयौं भने यो अवस्था नियन्त्रणमा आउँछ ।
भाद्र २२, २०७७ सोमवार १८:३२:४३ बजे : प्रकाशित
गोकुल बाँस्कोटा, क्लिन फिड र फाइदाहरु
सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । आउँदो कात्तिक ८ गतेबाट क्लिन फिड कडाइका साथ लागू गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । क्लिन फिड लागू भइसकेपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापन रहित (क्लिन फिड ) हुनेछ ।
सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत् विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित लागू गर्ने तयारी गरेसँगै इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले पनि अन्ततः साथ र समर्थन दिइएको छ । संसदले विज्ञापन ऐन पारित गरे लगतै सर्वसाधरणदेखि कलाकारहरुले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् ।
अहिले नेपालको विज्ञापन बजार करिब आठ अर्ब रुपैयाँको आसपासमा रहेको बताइन्छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशमै कलाकारदेखि प्राविधिकसम्मको रोजगारी बढ्ने मात्र नभई सरकारी राजश्वमा पनि त्यसै अनुसार वृद्धि हुने निश्चित छ । विदेशी विज्ञापन बन्द भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि नेपालमै विज्ञापन बनाउनुपर्ने भएकाले यसको आन्तरिक स्रोत प्रयोग हुन्छ । हाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरु नेपाली भाषामा डबिङ गरेर विज्ञापन प्रसारण भइरहेको छ ।
क्लिन फिड लागू भएपछि डबिङको कार्य पनि रोकिने हुँदा स्वदेशी कलाकार प्राविधिक र विज्ञापनका अन्य जनशक्तिले रोजगार पाउने छन् । नेपाली भाषामा डबिङ गरेर प्रसारण गरिएका विज्ञापनको बजार मात्र अहिले करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड ) बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले यो नीतिलाई अघि सारेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १ को उपदफा २ मा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७५ तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । यसलाई संशोधन गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने राखेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो ।
बार्षिक अर्बाैंको विज्ञापन नेपालले अहिले भारतीय च्यानलहरुकै कारण प्रशारण गर्नुपरेको छ । विदेशी च्यानल पैसा तितेर हेनुपर्ने बाध्यता छ । क्लिन फिड लागू भएमा यस्ता निःशुल्क विज्ञापनहरु बन्द हुनेछ । नेपालको लागि नेपालमै विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कानूनी दायरामा रहेर प्रशारण गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनकै नाममा भारततिर जाने करोडौं रकमको हिस्सा रोकिनेछ । क्लिन फिड ले नेपाली कला, संस्कृति र परिवेशलाई प्रवद्र्धनसमेत गर्नेछ ।
तसर्थ सदैव कलाकारहरु क्लिन फिड को पक्षमा रहँदै आएका छन् । क्लिन फिड ले नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने र चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, प्राविधिक, गीत संगीत क्षेत्रमा लागेका सर्जक लगायत सिङ्गो क्षेत्रलाई नै लाभ हुने विश्वास छ । हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले क्लिन फिड को पूर्ण समर्थन गर्दै बहस शुरु गरेका थिए ।
क्लिन फिड को नीति नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हितमा हुनेछ । नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा प्रशारण हुने विदेशी विज्ञापन रोक्ने र विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रशारण गर्न नेपाल सरकारले क्लिन फिड योजना लागू गर्नु देशको अर्थतन्त्रलाई मात्र फाइदा नभई समग्र नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि फाईदा पुग्नेछ ।
विदेशीलाई हाम्रो देशमा घुम्न बोलाउने हो, यहीँ स्थायी बसोबास गराउने होइन । त्यस्तै विदेशी टेलिभिजनलाई पनि नेपालमा स्वागत गर्नुपर्छ । उनीहरुको ब्रान्ड प्रमोशन गर्ने, विज्ञापनलाई होइन । उनीहरुको टेलिभिजनमार्फत नेपाली विज्ञापनलाई बढवा दिनुपर्छ । यसर्थ क्लिन फिड ले सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ।
राष्ट्रियता, झण्डा बोकेर मात्रै हुँदैन, हरेक क्षेत्र र दृष्टिकोणबाट राष्ट्रियतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ । यहि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने अभियान मध्यको एक क्लिन फिड लागु गर्न जोडतोडका साथ लागेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विपक्षमा धेरै मिडिया हाउस र टेलिभिजन महासंघ नै लागेका थिए ।
नीजि स्वार्थलाई बढवा दिँदै विभिन्न संघ संस्थालाईसमेत परिचालित गरि गोकुल बाँस्कोटाको विरोध गरेको धेरै प्रसंगहरु छन् । तर, गोकुल बाँस्कोटाको क्लिन फिड सपना त्यस्ता कुनै पनि विरोधका कार्यक्रमहरुले रोक्न सकेन । अन्ततः बाँस्कोटाको पालामा अघि सारिएको क्लिन फिड नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
हामीले गाउँको मह चाका छोडेर ‘डाबर हनी’ खान थालेको धेरै भयो, नेपाली जुत्ता, नेपाली खाना, नेपाली मनोरञ्जनको स्थान अहिले विदेशी ब्रान्डले लिएका छन् । कारण गुणस्तर मात्रै होइन, विदेशी टेलिभिजनमा आउने विज्ञापनको असर पनि हो । यसको लागि पनि गोकुल बाँस्कोटाले क्लिन फिड आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा टेलिभिजनसँग सम्बन्धित् संघ संस्थाले प्रशारण नै रोकिदिने धम्कि दिँदै विरोध गरेका थिए ।
क्लिन फिड लागू गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा केही केवल च्यालनहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला । तर, एक दुई नागरिकको फाइदाभन्दा देशको फाइदा सोच्नुपर्छ । यसो गर्दा हाम्रो देशभित्र बन्ने टेलिभिजन सामाग्री स्तरीय हुनेछन् । हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयातित् हुन्छ, ती सामग्रीहरुको विज्ञापन स्वदेशमै निर्माण हुनेछन् ।
सुन्दा सामान्य लागेपनि यो निर्णयले आर्थिक, सांकृतिक रुपमा पक्कै सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । अहिले भारतका सयौं च्यानल खुल्मखुल्ला नेपालमा प्रशारण भइरहेका छन् । उनीहरुको विज्ञापनलाई हेर्दा हेर्दा हुर्कंदै गरेको साना बाबु नानीले भारतीय संस्कारलाई बढवा दिइरहेको छ । त्यसैले क्लिन फिड लागू भएमा नेपालको कला, संस्कृति, संस्कार र पहिचान तथा परिवेशलाईसमेत प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
क्लिन फिड लागूपछि कतिपय विदेशी साना च्यानलहरु त यसै पनि नेपाल आउने छैनन् । जसले गर्दा नेपाली टेलिभिजन र टेलिभिजनका कार्यक्रमहरु स्तरीय हुनेछन् । नेपालीले हाम्रो आफ्नै नेपालको सामग्रीहरुप्रति सद्भाव र माया पुनः बढाउने छन् । यो गोकुल बाँस्कोटाको कुनै व्यक्तिगत र सानो सपना थिएन । एक क्षेत्रले नेपालको बृहत्तर विकास र कला, संस्कृति प्रवद्र्धनको अभियान समेत थियो ।
के हो क्लिन फिड ?
यसको शुरुवात तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेका हुन् । आमसञ्चार नीतिमार्फत क्लिन फिड को व्यवस्था गरि नीतिअनुसार नै २०७४ साउन १ देखि यो लागू हुने भनिए पनि टेलिभिजन वितरककै विरोधका कारण त्यति बेला स्थगित भएको थियो । अहिले नेपालमा करिब १५० वटा विदेशी च्यानल प्रसारण भइरहेका छन् ।
तीमध्ये भारतीय च्यानलको हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । भारतीय च्यानलबाहेक अन्य देशका कतिपय च्यानल अहिले विज्ञापनरहित छन् । भारतीय च्यानलमध्ये करिब आधा च्यानल ‘पेड’ छन्, जुन प्रसारणका लागि नेपाली टेलिभिजन वितरकले पैसा तिर्दै आएका छन् । त्यस्ता पेड च्यानलमा विज्ञापन राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनले गरेको हो । त्यसबाहेक कतिपय ‘फ्री टु एयर’ च्यानलहरू पनि नेपालमा प्रसारण भइरहेका छन्, जसको प्रशारण गरेबापत वितरकहरूले पैसा भने तिर्नुपर्ने छैन ।
विदेशी च्यानल मात्रै हेर्नको लागि नेपालका टेलिभिजन वितरकहरुले मासिक करोडौं रकम विदेश पठाउनु पर्ने अवस्था थियो । यसले नेपाललाई बार्षिक झण्डै आठ अर्ब बराबरको घाटा दिइरहेको छ । क्लिन फिड लागू भएमा यो घाटा शून्य अवस्थामा झर्ने र नेपालमा विज्ञापन निर्माणमा बढवा दिँदा आर्थिक आम्दानी शुरु हुनेछ ।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार १८:५६:५५ बजे : प्रकाशित
# क्लिन फिड
नेपाली समाजमा हिन्दी फिल्मी जीवनशैलीको भाइरस
नेपालमा सबैभन्दा बढी गाली खानुपर्छ भने त्यो नेताहरूले नै हो । नेताले देश बिगारे, नेतालाई यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने जस्ता अभिब्यक्तिहरू प्रायः सुनिन्छन् । देशका नागरिकको कर्तव्य के हो ? हामी के गरिरहेका छौ ? हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने नेताले मात्र होइन देशका प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने हो । जनता नबिक्ने हो भने नेता बिक्न सक्तैन । समाज सपार्नु र बिगार्नुमा जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । देशको आत्मा समाज–संस्कृति हो । समाजको मालिक जनता हुन् । राजनैतिक रुपमा देशले जति छलाङ् मारे पनि समाज बिग्रिनाले देश बरबाद भएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् ।
समाज–संस्कृतिको परिवर्तन अति मन्द गतिले हुन्छ । राजनैतिक परिवर्तन जसरी छलाङ् मारेर भयो त्यसैगरी पछाडि फर्कन पनि सक्छ । तर समाज नयाँ युग, नयाँ दिशातर्फ बढिसकेको छ भने त्यो प्रायः अप्रत्यावर्तित नै रहन्छ । हिन्दी गीत र फिल्मी जीवनशैलीप्रति नेपालीहरूको आकर्षणका कारण आज नेपाली समाज डरलाग्दो ढङ्गले नयाँ दिशा तर्फ बढिरहेको छ । यसले नेपाली समाजलाई तत्कालै त त्यति असर नगर्ला तर कालान्तरमा भने गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालमा एक सयभन्दा बढी भाषाका प्रथम भाषीहरू छन् । हरेक भाषाभाषीहरू राजनैतिक वृत्तबाट आफ्नो भाषाको सुरक्षा चाहन्छन् तर स्वयम् भने आफ्नो भाषा र संस्कृतिको सुरक्षा र विकास तर्फ भने क्रियाशील देखिंदैनन् ।
नेपालको तराई–मधेसमा बोलिने थारू, अवधी, भोजपुरी, मैथली (भाषिका ठेटी) आदि भाषाका वक्ताहरूले आफ्नो मातृभाषाको सुरक्षण र विकासमा आफ्नो सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा नगरेझंै हिमाल, पहाडमा बोलिने तामाङ्गी, गुरुङ्गी, लिम्बू, राई, नेवारी, मगराती आदि भाषाका बक्ताहरू आफ्नो भाषिक सुरक्षण राज्यबाट मात्र सम्भव हुने अभिलाषा राख्तछन् । वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा आपैंmले आपैंmलाई प्रदान गरिने सुरक्षा नै हो । आफ्नालागि आपूm जबसम्म क्रियाशील भईंदैन तबसम्म बाहिरी सुरक्षा फितलो नै हुन्छ ।
नेपालमा हिन्दी फिल्मी संस्कृति यति प्रिय छ जति स्वयम् भारतमा पनि छैन । त्यहाँ फिल्ममा देखाइए जस्तो सस्तो प्रेम विवाहको प्रचलन पनि छैन । भारत नेपालभन्दा धेरै धनी छ, तर भाषिक तथा सामाजिक रूपले त्यहाँका बासिन्दा हामीभन्दा अति सङ्कुचित छन् । तपाईं भारतको विहार छाडेर अरु राज्यमा जानुहोस् त्यहाँ हिन्दी भाषा र फिल्मी संस्कृतिको साम्राज्य पाउनुहुने छैन । भारतका प्रत्येक प्रान्तमा अलग–अलग भाषाहरू रहेका र तिनको सम्बद्र्धन स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । भारत भित्रै पनि हिन्दी बोल्न मन नपराउनेहरू पनि धेरै छन् । तर, नेपालमा भने हिन्दी भाषा र फिल्मी संस्कृति शीर्ष स्थानमा छ । हिन्दी भारतको राष्ट्र भाषा हो, तर यो भारतको कुनै पनि प्रदेशका नागरिकको प्रथम भाषा पनि होइन र कुनै पनि प्रदेशमा त्यसको अत्याधिक प्रयोग पनि गरिंदैन । यो भारतको माध्यम भाषा हो र यसले बिस्तारै आफूलाई सार्क क्षेत्रको माध्यम भाषाका रूपमा तयार गर्दैछ ।
हिन्दी फिल्मी जीवनशैली नेपाली समाजमा भित्रिएको भाइरस हो । यसले नेपालको मनोरञ्जनको बजारमा एकाधिकार कायम गरी अरबौं रुपियाँ लुटेको त छदैंछ, साथै यसले नेपालको सामाजिक मैदानमा प्रशस्त चलखेल गर्ने मौका पनि पाएको छ । एउटा फिल्मको हिरोले ‘मलाई नेपाल मन पर्दैन’ भन्दा यहाँ रक्तपात हुन्छ । नेपालीहरु मर्माहत हुन्छन् । तत्कालीन समयमा यस्तै भयो पनि । कुनै काल खण्डमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आक्रोश व्यक्त गर्ने काठमाडौंका देशभक्त नेपाली विवाह, पार्टी आदि जस्ता सार्वजनिक समारोहमा ‘अनारकली डिस्को चली, हुक्काबार, बेवी डल, सिटिया कलैया, आज ब्लु है पानी पानी’ जस्ता गीतहरु बज्न थालेपछि त्यहाँ धुम मच्चिन्छ, उनीहरु आफूलाई रोक्नै सक्तैनन् र कम्मर मर्काउन थालिहाल्छन् ।
काठमाडौं देशको राजधानी हो । नेपाल बिग्रन वा बिक्न टिङ्कर वा देशको अरू सिमाना बिक्नु, बिग्रनु पर्दैन, काठमाडौं बिके वा बिग्रिए पुग्छ । काठमाडौं बिक्न त्यहाँको भूगोल बिक्नुपर्दैन आत्मा बिके पुग्छ । तसर्थ काठमाडौं बिके नेपाल बिक्छ, काठमाडौं बिग्रिए नेपाल बिग्रन्छ । काठमाडौंको तरङ्ग सिङ्गै नेपालमा फैलनु कुनै आश्चर्य होइन । हिन्दी गीतहरु नेपालको तराईमा मात्र होइन हिमाल पहाडका कुनाकाप्चामा पनि घन्किइरहेका हुन्छन् । ताप्लेजुङ्देखि दार्चुलासम्मका हिमाली तथा पहाडी भेगमा यात्रा गर्दा बसभित्र हिन्दी गीतकै रन्कोमा रङ्गिएको नेपाली पाइन्छ । झन् काठमाडौंका यात्रुवाहक बस अथवा मेला, धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक समारोह आदिमा ठुल्ठूला आवाजमा हिन्दी भजनदेखि प्रेम गीतहरूसम्म सुन्न पाइन्छन् । नेपाली जनमानसमा भित्रिंदै गएको अर्को भयानक रोग हिन्दी फिल्म र सिरियल हुन् । नेपालका नवधनाढ्य शिक्षित वर्गका नारीहरुलाई कुमकुम भाग्य, जमाइ राजा, ससुराल सिमरका, मेरी आशिकी तुम्सेही आदि हेर्न नपाए दिन काट्न गाह्रो हुन्छ । यहाँका युवा युवती कतिपय हिन्दी फिल्मका गीत सिरानमा नबजाई सुत्तैनन् । स–साना केटाकेटीहरु निन्जा हथौडी, मोटु पतलु जस्ता सिरियल हेर्न थालेपछि टिभीको रिमोट कसैलाई दिंदैनन् । यसरी हिन्दी भाषा र फिल्मी संस्कृतिले नेपालका केटाकेटीदेखि बुढाबूढीसम्म तथा सार्वजनिक स्थलदेखि भान्सा, ओछ्यानसम्म अधिपत्य जमाएको छ ।
यहाँको नेवारले आफ्नो गाडी तथा जातीय समारोहमा नेवारी त के नेपाली गीत पनि बजाउँदैन । यहाँका खस, राई, लिम्बु, मगर, थारू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि कुनै पनि भाषीले आफ्नो घर तथा आफूद्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो भाषाको गीत सुन्दैनन् । नेपालको मधेस आन्दोलनको समयमा अपहरणमा परेर फिरौती दिई उम्किएपछि तराईको सम्पूर्ण घरजग्गा बेचेर काठमाडौं बस्तै आएका मेरा एक मित्रले द्ुखेसो पोखे “तराईको घर जग्गा बेचेर म सुरक्षित भएँ भनेको, अब त आत्मा नै बेचियो । यहाँको पालो कहिले हो ? थाहा छैन ।” उनको आशय पनि काठमाडौंका नेपालीहरुको भाषा र संस्कृतिको पलायनतर्फ नै थियो । वास्तवमा समाज संस्कृति यसै गतिमा चलिरह्यो भने नेपाल कसैले हडप्नु पर्दैन, हामी आफैं विलय भइसकेका हुनेछौं ।
हामीले ऋतिक रोशनको पोष्टरमा गोबर छ्यापेर र कसैको भाषण र सपथमा आन्दोलन गरेर होइन आफ्नो ओछ्यान, बैठक, पूजामण्डपदेखि सार्वजनिक सभा, समारोहलाई कति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौं ? त्यो विचारणीय छ । देशमा यो भएन, त्यो भएन, नेताहरुले देश बिगारे भन्ने कुरा मात्र गर्ने होइन; देश, समाज, संस्कृति सपार्न वा बिगार्न हामी आफू कति जिम्मेवार छौं, त्यो मननीय छ ।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार १२:५०:४५ बजे : प्रकाशित
विश्वराज खतिवडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस
युवा र नेपाली राजनीति
वास्तवमा, युवाहरू नै राष्ट्रको परिवर्तनगामी शक्ति हुन्। त्याग, निष्ठा, बलिदान र नवनिर्माणको सुन्दर भावनाद्वारा प्रतिबद्ध युवाहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि एवम् उदयीमान शक्ति मानिन्छ । युवाहरू स्वभावैले विद्रोही हुन्छन्। । उनीहरुको नशा नशामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नविन उर्जाहरु सल्बलाईरहेको हुन्छ । विश्व सर्बहारा वर्गका महान गुरु माक्र्सले युवाहरू हो जिते संसार छ, हारे केही पनि छैन भनेर जित्नका लागि संसारभरका युवा वर्गमा आह्वान गरेका थिए । यो यथार्थता बहुसंख्यक श्रमजीवी किसान मजदुरहरुले भरिएको नेपालका श्रमिकका सन्तति युवाहरुको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक थियो, छ र रहिरहने छ ।
युवाहरु यथास्थितिबाट आफू र आफ्नो समाजमा मुक्ति दिँदै सामाजिक रुपान्तरणको महाअभियानमा समेत युवा वर्गले अग्रिम भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा जनमुक्ति जनजीविका अनि राज्य स्वाधीनताका लागि निरंकुश शासनका दानवीय छायाँलाई परास्त गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशाल राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यमा नेपाली युवाहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता विश्वकै लागि अनुपम एवं ऐतिहासिक सन्देश बन्न पुगेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय भ्रष्ट खेल, क्रुर उपेक्षामाथि खुराफात र पाखण्डको परम नमुनासँग, राष्ट्रको शक्ति एवं सत्ताको मञ्चमाथि यस्ता कुरूप नाटक प्रदर्शन भएका छन् । यसले जनताको बौद्धिकता अपमानित भएको छ । आँत थाकेको छ ।
नेपाली राजनीतिलाइ फनक्क फर्केर यो नाटक वहिष्कार गरिदिऊँ या यसका पूरै पात्र फेरेर नयाँ कथा रोजुँ । तर नेपालीको दुर्भाग्य राजनीतिक मञ्चमा विफलता र भ्रष्टताले आ–आफ्नै रङ–रङका तमासा दोर्होयाइसकेका छन ।
इतिहासमा असफलसिद्ध तिनै लम्पट नेतृत्वहरुप्रति बिना सर्त निकै लामो संघर्ष र बलिदानी गरेर आएका लाखौं कार्यकर्ताहरु मलामी जान तयार भईरहे । भए ।
नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य, सबै राजनीतिक गतिविधिको अगाडि युवापंक्ति मुकदर्शक बनिरह्यो। अझ बिशेषत यिनका मातृपार्टी संबद्ध भातृ संगठनहरु विद्यार्थी आन्दोलन सधैं प्रतिपक्षी आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
करिब ४० प्रतिशत युवाशक्ति रहेको नेपालबाट बर्सेनि लाखौँ युवा रोजगार, शिक्षालगायत भविश्यका सुनौलो सपनाको खोजीमा विदेश गइहेका छन् भने कतिपय युवाहरु विदेशमा नै पलायन भइरहेको यथार्थता हामीमाझ छ । भर्खरै कोरियामा काम गर्न जानका लागि ७५ हजार ५८० युवाहरुले आवेदन भरेका थिए, जसमा करिब १० हजार २०० जना उत्तीर्ण भएका छन् । आ.व. २०७३÷०७४ मा कतार, साउदी, दुवई, कुवेत, बहराइन, ओमन र साइप्रस जस्ता खाडी मुलुक तथा मलेसिया जानका लागि ३ लाख ७३ हजार ४६३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । भारततर्फको खुला सिमानामा त झन बर्सेनि लाखौँ युवा मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न सहरहरु निम्नस्तरको काम गर्न गइरहेका छन् । विदेशी बजारमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य युवा वैदेशिक
रोजगारका नाममा ठगिइरेका छन् । नेपाली युवाको श्रमका साथसाथै रकम दुवै बाहिरिरहेको छ । हाम्रा मुलुकका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत युवा जनशक्ति बाहिरिरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्रको आमूल परिवर्तनकालागि गरिनुपर्ने राजनीति आज अधिकांश युवावर्गको वितृष्णाको केन्द्र बनेको छ । बदनाम राजनीतिज्ञहरूको नाम लीई गाली गलोच गर्ने सामाजिक सञ्जालमा होहल्ला गर्ने, राजनैतिक घटना क्रमहरूको अपव्याख्या गर्ने, युवा माज नकारात्मक चिन्तन को विकाश गराउने र आफू राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्ने जमात ठुलै छ । यो झन् विशिष्ट प्रकारको राजनीति हो भन्ने कुरा आजको युवा बुझ्दैनन् ।
उसको मानसपटलमा यस्ता नकारात्मक चिन्तनहरू भरिएका हुन्छन् र उसलाई कसैले बुझाउन खोज्दा पनि ऊ बुझ्दैन । राजनीति थोर बहुत बुझ्नका लागि पनि इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमहरुको ज्ञान हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कतिपय युवावर्गलाई त राजनैतिक विषयमा कमसेकम ज्ञान पनि हुँदैन, तर चर्को स्वरमा राजनीतिज्ञलाई गालीगलौज गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक ट्रोलहरु बनाउनेमा उनै अग्रपंक्तिमा पर्छ । अधिकांश यस्ता कुराहरू कसैको स्वार्थ पुरा गर्न बनाइएका प्रायोजित र कपोकल्पित कुरा हुन्छन् । चेतना नै नभएपछि यस्ता कुरा बुझ्ने त कुरै भएन ।
राणा शासनदेखि संघीय गणतन्त्र सम्मको यात्रा तय गरिसकेको हाम्रो देश यिनै व्यवस्था परिवर्तनका लागि कैयौँले बलिदान दिएका छन् । यस क्रममा विभिन्न आन्तरिक युद्धहरु भए, राष्ट्रले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्यो । अस्थिरताको भूमरीमा मुलुक फस्न पुग्यो । आज आएर मुलुकले केही हदसम्म स्थिरताका पाएको छ ।
अब हामीले अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्छ, आजको युवा पिँढी यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झिएर हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वसँग युवावर्गको टाढिँदै गएको सम्बन्धले अर्को दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । सम्बन्ध नजिक होस् पनि कसरी हिजो चप्पल पड्काएर सिंहदरवार छिरेका नेताहरूको रहनसहन देख्दा कसलाई चित्त बुझ्दो हो । आजको युवाको अवस्था यस्तो भएको छ कि विज्ञ विद्वानका कुरा नकारेर कमेडियनका कुरा मार्केटमा रुचाइन थालिइएको छ ।
चरम चाकरीमा टिकेको नेपाली राजनीति यसको मुख्य कारण हो । यहाँ हरेक नागरिक आफ्नो स्वार्थका लागि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, राज्य विरोधी, अभियन्ता आदि बन्छन् (अपवादलाई छोडेर) । यहाँ विचारको त कुरै नगरौँ, शीर्षनेताहरुले नै अचार बनाएर खाइसके । कार्यकर्तालाई त के थाहा, के कम्युनिस्ट ? के कांग्रेस ? आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाए पुग्यो । हुन त सबैको बाध्यता हुन्छ यसबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन भन्छन्, मेरो पनि बुझाइ यस्तै छ ।
अब युवा चेतनशील हुन जरुरी छ र राजनीतिबाट पर भागेर मुलुकलाई झन दुर्घटनामा धकेल्ने काम गर्नुहुँदैन । यसलाई हस्तक्षेप गर्ने गलत प्रवृद्धि भएका व्यक्तिहरुलाई स्थान नदिने आज यो कुरा युवाले नबुझ्दा भोलि त्यही गलत प्रवृद्धिका मानिसले स्थान पाउँछन् र मुलुक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम झनै बढेर जान्छ ।
गाउँबस्ती, टोल सबैतिरबाट ऊर्जाशिल युवाहरु जाग्ने बेला आएको छ । चाकडी गर्न छोडेर नेतृत्वलाई खबरदारी दिन जरुरी छ ।शीर्ष नेताहरुलाई सम्झाउने कोही नभएर पनि आफ्नो बाटो भुलेका हुन सक्छन्, उहाँहरुले व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठूलो बलिदान, त्याग र तपस्या गर्नुभएको छ यसलाई हामीले कदापि भुल्नु भने हुँदैन । हरेकले आफूमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुपर्छ । आफ्नो स्वार्थमा लिप्त कदापि हुन हुँदैन ।अभिभावकहरुले पनि आफ्ना सन्ततिलाई राजनीतिक चेतना दिन जरुरी छ । जस्तोसुकै परिवन्धमा परियोस् गलत प्रवृत्तिको डटेर प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ । यद्धपि जबसम्म परिवन्धमा परिँदैन तबसम्म यस्ता क्रान्तिकारी कुरा गरिन्छ र भोलि जालमा फसेपछि गलत गन्तव्य समात्न बाध्य भइन्छ कि भन्ने डर सबैमा छ ।
सम्पूर्ण युवाहरूलाई म यो कुरा अवगत गराउन चाहान्छु कि, मण्डेला, ओबामा, गान्धी, बुद्ध, जनक, आइन्स्टाइन, वीपी, गणेशमान, केपी, जीपी, प्रचण्ड, बाबुराम, मदन, मनमोहन सबैले आआफ्नो युवा अवस्थामा गरेको ऐतिहासिक कार्यबाट आज विश्व आश्चर्यचकित मात्रै होइन लाभान्वित समेत भएको छ । त्यसैले आउनुस, हामी पनि युवा अवस्थामा केही रचनात्मक काम गरौँ ।
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १९:२३:४४ बजे : प्रकाशित